Sina OTOPYYK TOPCP20-20D Famirapiratana any ivelany amin'ny famokarana angovo maivana amin'ny angovo, fanamboarana sy orinasa | EYELED
Fampisehoana LED raikitra
Fanehoana taratra LED
Fampisehoana tarihin'i Curtian
Fampisehoana tarihin'ny mangarahara
Fampisehoana LED mitsitsy angovo
Efijery LED LED famoronana
Fampisehoana LED Pixel Pitch LED kely
OTOPYYK TOPCP20-20D Fahazavana an-kalamanjana mamonjy angovo any ivelany
1. efijery fisoloana jiro LED. ny firafitra dia karazana poakaty sy endrika harato, ny indostria koa dia miantso azy hoe efijery, efijery poakaty,
2. Ny fanaovana ny tetik'asa fampisehoana ho malefaka kokoa sy bebe kokoa ary faharesen-dahatra sy safidy noho ny efijery
3.High bar miharo hazavana mitambatra, fahamarinan-toerana avo lenta.
Ny famolavolana elektrika tsy manam-paharoa dia noraisina mba hampihenana ny isan'ny jiro.
Ny tadin'ny jiro 16 tsirairay dia mizara andiana herinaratra sy tsipika famantarana. Amin'ny toe-javatra mitovy amin'izany dia ahena 94% ny fahafahan'ny plug-in mahantra.
4. Famolavolana integral an'ny kabinetra fanaraha-maso sy ny rafitra fametrahana.
Ny kabinetra fanaraha-maso dia tsy ampahany amin'ny efijery ihany, fa koa ampahany amin'ny firafitra. Tsotra be ny firafitry ny efijery, ary tsy misy plug-in na fifandraisana hita amin'ny fisehoan'ny efijery. Tsy tsara tarehy ihany, fa manatsara be ihany koa ny fitoniana.
5. Rafitra fanatsarana tena tsara, tsy mila mametraka rivotra amin'ny rivotra. Ny bara jiro LED tsirairay avy dia vita amin'ny firaka aliminioma, izay mangarahara manodidina, mba hahafahany mahazo fampangatsiahana tena. Mandritra izany fotoana izany, ny herinaratra, ny fanaraha-maso sns dia atokana amin'ireo fitaovana mamoaka hazavana, ka tsy ilaina ny manangana rafitra fampangatsiahana manokana toy ny efijery LED nentim-paharazana.
Mitsivalana 20 Mitsangana 20
Haben'ny kabinetra unit
600 (W) X 1200 (H)
Pikantsary kabinetra unit
Fanapahan-kevitry ny kabinetra
30 (W) X 60 (H)
Ny lanjan'ny kabinetra unit
Ny hatevin'ny kabinetra unit
Famirapiratry ny efijery
Mitsivalana ≥110 ° mitsangana ≥60 °
Ny halaviran'ny fijery tsara indrindra
Maody mitondra fiara
Tsy miovaova ankehitriny
convection namboarina nohatsaraina firafitra
IP67 lafiny roa
Temperature miasa / fitehirizana
Fitaovana fametrahana frame
Tady vy vita amin'ny vy mangatsiaka 2.0mm
fametrahana haingana Fitaovana tsy misy
Tazomy ny hafainganana
10S / unit
Tazomy ny maody
Eo anoloana na eo ambadika
Ny efijery Grid dia ampiasaina amin'ny fananganana rindrina, rindrina ambainy fitaratra, tampon-trano, ary basy fanoherana ny fiaramanidina ivelany, ascenseur fitsangatsanganana ary sehatra hafa. Sns
Mora ny mampiditra
Ny fametrahana sy ny fikojakojana haingana dia afaka apetraky ny olona iray in10 segondra isaky ny metatra toradroa, 60time haingana kokoa noho ny fametrahana ny takelaka LED nentin-drazana nentim-paharazana satria rafitra iray misy patanty io dia mitaky 3 minitra isaky ny squaremeter hitazomana.
Na mijery avy amin'ny adista ianao na akaiky. azonao atao ny manasa ny atiny mazava tsara amin'ny efijery.
Ny salanisan'ny herinaratra ampiasain'ny vokarinay dia 220 ihany, izay mahomby kokoa noho ny orinasa hafa
FIAINANA SERVICE LONG
Ny famolavolana ny rivotra tanteraka, ny fanaparitahana voajanahary, handresena ny tsy fahampian'ny fomban-drazana, ny faritra midadasika amin'ny habakabaka mihidy dia tsy afaka mamoaka hafanana, mora simba ny rafitra
Easyto ao amin'ny fivarotana
Varavarankely, rindrina ambainy fitaratra, bara, fampisehoana auto, fialamboly, kianja, hotely, fanofana fampakaram-bady, sehatra, tranombakoka, fampirantiana, ivontoerana fivarotana, sinema, sns.
fonosana amin'ny boaty hazo sy alim-pito alimina miaraka amin'ny ranomasina, rivotra, lalamby
Matetika mifantoka amin'ny mpanjifa, ary io no ifantohanay farany tsy ho iray amin'ireo mpamatsy andraikitra tena mendri-pitokisana sy mahatoky indrindra, fa koa mpiara-miombon'antoka amin'ny mpanjifanay amin'ny vidin'ny fifaninanana ho an'ny fampiratiana LED mangarahara anaty sy ivelany (P15.63 / P12.5 / P10 .42 / P8.93 / P6.25 / P5.21mm), manana mpiasa matihanina amin'ny varotra iraisam-pirenena izahay. Halaminay ny olana izay ho afa-po anao. Hanolotra ny vokatra tadiavinao izahay. Aza hadino ny mahatsapa tena fa afaka miantso anay ianao.
Vidiny mifanentana amin'ny rindrina Video CED avy any Shina, LED Screen, ankoatr'izay misy ihany koa ny famokarana sy fitantanana matihanina, fitaovana famokarana mandroso mba hiantohana ny kalitao sy ny fotoana fandefasanay, ny orinasanay dia manaraka ny fitsipiky ny finoana tsara, kalitao avo lenta ary fahombiazana avo lenta. Manome toky izahay fa hiezaka mafy ny orinasanay mba hampihenana ny vidin'ny fividianana mpanjifa, hanafohezana ny vanim-potoanan'ny fividianana, ny kalitaon'ny vokatra azo antoka, hampitombo ny fahafaham-pon'ny mpanjifa ary hahatratra ny toe-javatra mandresy.
Voafetra ny hazavan'ny jiro
dia mpamokatra solosaina mpamokatra angovo avo lenta avo lenta avo lenta avo lenta ao Hongkong sy Shenzhen (Anaran-kafa Anothercompany) any Shina, manana 20.000 000 metatra toradroa ledscreens isam-bolana izahay. Miaraka amin'ny tsipika mandeha ho azy automativaly sy ny tsipika fanamainana tombo-kase, dia efa nanolotra LED Display amin'ny toerana rehetra manerantany izahay amin'ny vidiny vita amin'ny-china sy ny kalitao andreliable
Ny vokatray dia be mpampiasa amin'ny dokambarotra any ivelany. activitiesstadiums kolontsaina sy fialamboly, trano fandraisam-bahiny, fanofana fampirantiana LED fampirantiana sns sns, miaraka amin'ny tombony azo antoka amin'ny efijery fampisehoana loko feno, manomboka amin'ny famolavolana, fametrahana amin'ny famokarana ka hatramin'ny fikojakojana. fampiasana vahaolana omni-directionalintegrated hampihenana ny vidin'ny foicustomers ary hanomezana tolotra akaiky kokoa ny mpanjifa.
EIMELED LIGHTING LIMITED dia tantanina hananganana endrika, famokarana, fenitry ny rafitra materialsy; hametraka ny dingan-dàlana sy ny rafitra fampiharana amin'ny alàlan'ny fampivondronana ny olona, ​​ny paikady, ny varotra: ny vokatra samihafa hanatanterahana ny filan'ny mpanjifa isan-karazany amin'ny tsena isan-karazany: ny fianakaviana EYELED dia manenjika hamaha ny olana amin'ny mpanjifa. ny mpanjifa mandritra ny fotoana maharitra.
Ny ekipa serivisy matanjaka, voaofana, mahay dia responsibleto manome ny serivisy fivarotana rehetra. Beforesale, manome drafitra teknika momba ny vokatra antsipiriany izahay Insale, mitarika sy mampiofana ny fametrahana ny displaycreen ho an'ny mpanjifanay izahay; aorian'ny fivarotana Manome antoka anay izahay noho ny hadisoana.
Ny toerana misy anay any Shenzhen dia miantoka anao amin'ny lozisialy fastand sy mahomby amin'ny alehanao: Byair, amin'ny lamasinina, amoron-dranomasina no misy rehetra. EYELEDDisplay dia vonona ny hahita fahombiazana amin'ny asa aman-draharaha mpiara-miasa LED.
Matihanina sy azo antoka
F1. Azoko atao ve ny manafatra santionany fampisehoana LED?
A: Eny, mandray anao izahay hanafatra santionany amin'ny fanandramana sy ny fanaraha-maso kalitao. Ny santionany mifangaro dia azo ekena.
F2. Misy fatra fatra farafahakeliny farafaharatsiny ho an'ny leddisplayA: fatra fatra ambany indrindra, azo ampiasaina amin'ny santionany amin'ny fizarana 1 metatra toradroa.
F3: Ahoana no hiatrehana ny tsy fahombiazana?
A: Voalohany indrindra, ny vokatray dia amboarina eo ambanin'ny rafitra fanaraha-maso kalitaon'ny astrict, miaraka amin'ny taha tsy latsaky ny 0. 2%. Faharoa, mandritra ny vanim-potoana fiantohana dia maniry jiro vaovao izahay amin'ny baiko vaovao amina tarika Fordefective kely, hanamboatra azy ireo izahay ary handefa anao indray, na afaka hiresaka vahaolana izahay, anisan'izany ny arecall mifototra amin'ny tena zava-misy.
F4: Manome fiantohana vokatra ve ianao?
A: Eny, manome antoka maharitra mandritra ny telo taona izahay.
F5. Ahoana ny fomba hanafarana ny seho LED?
A: Voalohany, ampahafantaro anay ny zavatra takinao na ny fampiharana faharoa, manonona izahay araka ny fangatahanao na ny ourproposal. Fahatelo, manamafy ny santionany ny mpanjifa ary mamoaka ny lamina ofisialy. Fahefatra, mandamina ny famokarana izahay
Teo aloha: OTOPYYK TOPCP16-33D Fametrahana HD Waterproofing LED Display
Manaraka: OTOPYYK TOPCP25-25D Creative Hollow LED Screen
OTOPYYK TOPCP15-15SOutdoor New Media advertisin ...
OTOPYYK TOPCP16-33D Fametrahana HD Waterproofi ...
Mangarahara p7.8 p15.625 p25 p31.25 p50 ivelany ...
OTOPYYK TOPCP31-31D Full Color HD High Vesoluti ...
OTOPYYK TOPCP15-15D namboarina Smart-Thin Smart ...
Adiresy: Room 1401, Building A, Jiansheng Building, Shenzhen, Guangdong, China
SIGNUP Ho an'ny NEWSLETTER
Raha misy fanontaniana, fanontaniana na teny fiderana, azafady
Mifandraisa aminay anio
© Copyright - 2021: Zo rehetra voatokana.